"1 Ary rehefa maty Mosesy, mpanompon’i Jehovah, dia hoy Jehovah tamin’i Josoa, zanak’i Nona, mpanompon’i Mosesy: 2 Efa maty Mosesy mpanompoko; koa mitsangàna, mità ity Jordana ity hianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin’ny tany izay omeko azy, dia ny Zanak’Isiraely. 3 Ny tany rehetra izay hodiavin’ny faladianareo dia efa nomeko anareo, araka izay voalazako tamin’i Mosesy. 4 Hatramin’ ny efitra sy ir? Libanona ir? ary hatramin’ny ony lehibe, dia ny ony Eofrata, ny tany rehetra izay an’ny Hetita, ka hatramin’ny Ranomasina Lehibe any andrefana no ho taninareo. 5 Tsy hisy olona hahajanona eo anoloanao amin’ny andro rehetra hiainanao; tahaka ny nombako an’i Mosesy no hombako anao koa; tsy handao anao na hahafoy anao Aho. 6 Mahereza sy matanjaha; fa hianao no hampandova ity firenena ity ny tany izay nianianako tamin’ny razany homena azy. 7 Koa mahereza sy matanjaha tsara hianao, hitandremanao hanao araka ny lalàna rehetra, izay nandidian’i Mosesy mpanompoko anao; aza miala aminy, na ho amin’ ny ankavanana, na ho amin’ny ankavia, mba hambinina hianao amin’izay rehetra alehanao. 8 Aoka tsy hiala amin’ny vavanao ity bokin’ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman-alina, hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo; ary amin’izany dia hahalavorary ny làlanao hianao sady hambinina. 9 Tsy efa nandidy anao va Aho? Koa mahereza sy matanjaha; aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin’izay rehetra alehanao. 10 Ary Josoa nandidy ny mpifehy ka nanao hoe: 11 Andeha mamaky ny toby, ka mandidia ny olona hoe: Manamboara vatsy ho anareo; fa raha afaka hateloana, dia hita ity Jordana ity hianareo ka hiditra sy handova ny tany izay omen’i Jehovah Andriamanitrareo ho lovanareo. 12 Ary ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny firenen’i Manase dia nilazan’i Josoa hoe: 13 Tsarovy ny teny izay nandidian’i Mosesy, mpanompon’i Jehovah, anareo hoe: Jehovah Andriamanitrareo manome fitsaharana ho anareo, ary homeny ho anareo izao tany izao. 14 Ny vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny biby fiompinareo dia hitoetra eo amin’ny tany izay nomen’i Mosesy anareo et? an-dafin’i Jordana; fa hianareo lehilahy mahery rehetra dia samy ho voaomana hiady ka hita eo alohan’ ny rahalahinareo hanampy azy, 15 mandra-panomen’i Jehovah fitsaharana ny rahalahinareo tahaka anareo, ka mba holovany kosa ny tany izay nomen’i Jehovah Andriamanitrareo azy; dia hiverina ho any amin’ny taninareo hianareo ka handova azy, dia ilay nomen’i Mosesy, mpanompon’i Jehovah, anareo et? an-dafy atsinanan’i Jordana. 16 Dia namaly an’i Josoa izy ireo ka nanao hoe: Izay rehetra andidianao anay dia hataonay; ary izay rehetra anirahanao anay dia halehanay. 17 Araka ny nihainoanay an’i Mosesy tamin’ ny zavatra rehetra no hihainoanay anao koa; homba anao anie Jehovah Andriamanitrao tahaka ny nombany an’i Mosesy. 18 Izay rehetra mandà ny didinao ka tsy mihaino ny teninao amin’izay rehetra andidianao azy dia hatao maty; koa mahereza sy matanjaha hianao."Josoa 1:1-18
Azo hinoana fa nahita ireo zavatra maro mitory ny fahalebiazan’Andriamanitra Josoa tamin’ny fotoana rehetra niainany niaraka tamin’i Mosesy. Ny mampahery manoloana ny asa dia Ilay Tompon’ny asa mihitsy no mifidy izay tiany hanompo azy (1, 2).
Ny iraka (mission) tsy miova. Raha maty tsy nahita ilay tany tondra-dronono sy tantely Mosesy, dia nisy solofo notendren’Andriamanitra hanohy ny asany (3-4).
Mahatoky Andriamanitra. Ny hahatanteraka ny fampanantenana nataony tamin’i Abrahama no iraka hefain’i Josoa (Genesisy 12:7; Deotoronomia 11:24)
Fanontaniana: Misy ve teny fampanantenany ho anao? Matokia fa hohefainy izany amin’ny fotoanany sy amin’ny fombany (Nomery 23:19).
Izy no mampitao. Misy fotoana mahatsiaro bitika ny mpanompony manoloana ny asa. Andriamanitra tompon’ny iraka tsy mandao ny sakaizany fa mampahery azy (5-6); mampahatsiahy ny fototry ny iraka (7); manome antoka fa Izy tsy mandao na mahafoy (9).
Ny antoky ny fahombiazana. Ny fo manaiky ny lalàn’Andriamanitra, misaintsaina izany andro aman’alina. Ny Baiboly, Tenin’Andriamanitra no torolàlana mahatoky hitondra antsika amin’ny fahalavorariana sy fahombiazana (8).
Fifampitokisan’ny mpirahalahy (12-16). Na efa nahazo ny anjarany aza ireo Robenita sy Gadita dia tsy namela ireo rahalahiny hiady irery. Nanaiky ny fahefana nomena an’i Josoa. Nitsodrano azy mba hahefa hatramin’ny farany ny adidy masina nampandraiketina azy (18).
Mampita toromarika: Toa an’i Mosesy nanoloana an’i Josoa, toa an’i Paoly nanoloana an’i Timoty, aoka ireo mpitarika am-perin’asa hivonona hanomana sy hampita antsakany sy andavany ireo toromarika avy amin’ ny Tompo mba ho tontosa amin’ny fahatsarana ny asa (2 Timoty 2:2).